Ukuqokwa: Ukuhlela Konke Okukodwa Ku-inthanethi Kwebhizinisi Lakho | Martech Zone
Amabhizinisi aneminikelo esekelwa kusevisi ahlala njalo efuna izindlela zokwenza kube lula kumakhasimende ukuthenga izinsizakalo zawo noma ukugcina isikhathi sawo. Ithuluzi lokuhlela i-aphoyintimenti elifana ne-Appointy kuyindlela engenamthungo yokufeza lokhu ngoba unganikeza ukusebenziseka kalula nokuguquguquka kokubhukha oku-inthanethi okungama-24 × 7 okuhambisana nezinzuzo ezingeziwe zokukhokha okuphephile online, izaziso zokubhuka ngokushesha, nokubhuka okungu-zero kabili.
Hhayi lokho nje, ithuluzi elisebenza konke ngaphakathi njenge Ukuqokwa ingakusiza futhi ukuphatha ibhizinisi lakho ngempumelelo enkulu, ukuqapha ukukhiqizwa kwabasebenzi, futhi ukhulise ibhizinisi lakho ngezici zokumaketha ezilungile.
Ukuhlelwa Kwe-inthanethi Okuqokiwe: Ukubuka konke kweSisombululo
Ukuqokwa iyisoftware yokuqokwa kwe-inthanethi ekuhlinzeka ngeplatifomu ekulula ukuyisebenzisa yokubhukha online, enezikhumbuzi ezizenzakalelayo, ukucubungula ukukhokha, uhlelo lokusebenza lweselula, nokunye okuningi! Kukusiza ukuphatha nokukhulisa ibhizinisi lakho ngokuthola amaklayenti amasha nokugcina akhona.
Bangaphezu kuka-200,000 abanikazi bamabhizinisi abavela ezimbonini ezahlukahlukene ezifana nokufundiswa, i-salon, i-spa, ezempilo nokuqina, izinsizakalo zobungcweti, uhulumeni nezinkampani ezizimele, amahhovisi ezokwelapha, ukusebenza kwebhizinisi, namaqembu, njll - beka ithemba labo ku-Appointy.
Ukuqokwa kusiza ibhizinisi lakho ngezinzuzo ezilandelayo:
Ukubhuka okungu-24 × 7 okuku-inthanethi
Ngokuqokwa, amaklayenti akho angahlela ama-aphoyintimenti nawe nganoma yisiphi isikhathi, noma kuphi, lapho evumelana nabo. Isebenza njengomamukeli wama-24 × 7, olawula uhlelo lwakho futhi akusindise ebunzimeni bokubhuka kwama-aphoyintimenti ngesandla usebenzisa ifoni noma i-imeyili. Amaklayenti angafinyelela ekhasini lakho lokubhuka ngesikhathi sabo. Ngaphezu kwalokho, awudingi ukukhathazeka ngokulahleka kwama-aphoyintimenti abhukwe ngaphandle kwamahora akho ebhizinisi!
Amaklayenti akho angakwazi ukuzihlelela kahle ngenqubo yokubhuka elula. Lapho kudingeka, bangakhansela noma bahlele kabusha ama-aphoyintimenti abo ngemizuzwana nje! I-Appointy futhi ikuvumela ukuthi wenze ngokwezifiso ikhasi lakho lokubhuka ukufanisa isithombe sakho somkhiqizo.
Isizukulwane Esihola Iziteshi Eziningi
Thuthukisa ukubonakala kwebhizinisi lakho online futhi ubekhona lapho amaklayenti akho ekhona - Google, Facebook noma Instagram! Ukuhlanganiswa kokubhuka kuka-Appointy kukusiza ukuthi usebenzise amandla wezokuxhumana ukuze ukutholele amaklayenti amaningi.
Ngokuqokwa, ungangeza inkinobho 'Yencwadi Manje' ku-Google MyBusiness, Facebook, naku-Instagram izibambo zakho ukuguqula izivakashi ezisebenza kakhulu zibe amaklayenti akhokhelayo. Inkinobho yencwadi manje izokwazisa izivakashi zephrofayili ukuthi zihlele i-aphoyintimenti nebhizinisi lakho khona kanye ngaphakathi kohlelo lokusebenza.
Ngokuhlanganiswa kwethu kwe-Reserve ne-Google, amaklayenti akho angakuthola kalula futhi akubhukhe ngqo kusuka kuwebhusayithi ye-Google Search, Maps ne-RwG. Ngale ndlela, uzobe ukhiqiza amaklayenti amasha amaningi ngaphandle kokukhokha i-dime!
I-Appointy ikuvumela ukuthi uthumele izikhumbuzo nge-imeyili nange-SMS kumakhasimende akho ngaphambi kokuqokwa ukunciphisa imibukiso engekho nemizuzu yokugcina ekhanseliwe. Amakhasimende akho angahlehlisa kabusha kalula uma engakwazi ukukwenza noma azise kusengaphambili ukuze ukwazi ukugcwalisa izikhala ezingenalutho futhi ungalahlekelwa yimali engenayo.
I-Appointy ihlangana nezinhlelo zokusebenza ezidumile zokukhokha njenge-Paypal, Stripe, Square ukunikeza izinketho zokukhokha ezisheshayo zamakhasimende ngesikhathi sokubhuka noma sokuphuma.
Ungakhetha ukwamukela ukukhokhelwa okugcwele, okuyingxenye, noma okungekho ku-inthanethi ngesikhathi sokubhuka. Ukukhokha kusengaphambili ku-inthanethi kungakusiza ukuthi ugweme ukubhuka okungajwayelekile futhi unikeze ukuvikelwa kokukhansela.
Ukuhlanganiswa kwe-Square POS ye-Appointy kugcwalisa ngokuzenzakalela imininingwane yokuqokwa futhi kuqinisekisa inqubo yokuphuma esheshayo nebushelelezi yamakhasimende akho.
Ikhalenda Lokuhlela Isikhathi Sangempela
Ikhalenda lesikhathi sangempela lika-Appointy likuvumela ukuthi ubuke isheduli yosuku lwakho shazi, ngamashejuli wabasebenzi abaningi kusikrini esisodwa. Khomba noma iziphi izikhala bese ugcwalisa isikhala esingenalutho ukuze usebenzise kahle isikhathi.
Ungashintsha ukutholakala kwakho nganoma yisiphi isikhathi kusuka kukhalenda. Ngaphezu kwalokho, ikuvumela ukuthi uhlele kabusha kalula ngesici sokuhudula bese uphonsa.
I-Appointy iphinde isekele ukuvumelanisa ngezindlela ezimbili ngamakhalenda athandwayo awomuntu siqu noma ochwepheshe afana ne-Google Cal, iCal, i-Outlook, nokuningi ukuze uhlale uhlala phezulu kohlelo lwakho losuku.
Abasebenzi Nokuphathwa Kwamakhasimende
Ukuqokwa kukuvumela unikeze abasebenzi bakho imininingwane yabo yokungena ngemvume, ebavumela ukuthi balawule uhlelo lwabo, ukutholakala, namaqabunga. Kukusiza ekuphatheni abasebenzi bakho ngobuhlakani, ngokwaba ama-aphoyintimenti emthonjeni okhululeke kakhulu / omatasa kakhulu, futhi kuthuthukise umkhiqizo.
I-CRM yokuqokwa ikuvumela wena nabasebenzi bakho ukuletha umuzwa weklayenti owenziwe waba ngowakho ngokulandela umkhondo wokuziphatha kwabo. Gcina imininingwane ebalulekile efana nezimpendulo zefomu lokungenisa, umsebenzi we-aphoyintimenti, umlando wokuthenga, amanothi nokuningi endaweni eyodwa.
Futhi ungaqoqa amaklayenti akho ngokukhaliphile ngokuya ngezimpawu eziyinhloko ezifana nomsebenzi, impendulo nokwethembeka ukugxila kumakhasimende alungile futhi wenze imizamo yakho ngempumelelo.
Ngohlelo lokusebenza lokubhuka lokuqokwa kuka-Appointy, ungaphatha ibhizinisi lakho lonke efonini yakho. Phatha ukuhlela, izinkokhelo, amakhalenda abasebenzi, ama-aphoyintimenti, nokunye okuningi ngohlelo lokusebenza usohambeni.
Ukuhlanganiswa kwe-Appointy ne-Zoom kukuvumela ukuthi uhlele ukubonisana okuku-inthanethi, imihlangano ekude, izingqungquthela, amakilasi abonakalayo, noma ama-webinars. Ngale ndlela unganweba ukufinyelela kwebhizinisi lakho ezindaweni ezahlukahlukene zesikhathi, emhlabeni jikelele.
Ukubhuka ngakunye kukhiqiza ngokuzenzakalela isixhumanisi somhlangano we-Zoom futhi isigaba noma iseshini ebonakalayo yengezwa ngokuzenzakalela kukhalenda lakho.
Imininingwane yokuqokwa ebonakalayo iboniswa ekhasini lokuqinisekisa lokubhuka, bese ithunyelwa nge-imeyili / isiqinisekiso sombhalo esizenzakalelayo kubo bonke ababambiqhaza. Ukuze ujoyine, amaklayenti kufanele achofoze nje isixhumanisi se-Zoom bese uhlelo lwabo lwe-Zoom luzokwethulwa!
Ama-analytics nokubika kwe-Appointy kukusiza ukuthi ulandelele izinkomba zakho zokusebenza ezisemqoka njengenombolo yama-aphoyintimenti, ukwaneliseka kwamakhasimende, ukuthengisa, ukusebenza kwabasebenzi nokuningi ngesikhathi sangempela. Hlala njalo ngaphezulu kokusebenza kwakho futhi wenze izinqumo eziqhutshwa yidatha ukuthuthukisa la ma-metric ebhizinisi.
Setha i-Appointy yebhizinisi lakho ngezinyathelo ezi-3 ezilula:
Misa - Faka izinsizakalo zakho namahora okusebenza. Faka ama-buffers, vimba izikhathi zokuphindaphinda uhlelo lwakho lwempilo yangempela.
Ungahlukıselana - Yabelana nge-URL yekhasi lakho lokubhuka namakhasimende. Yengeze kuwebhusayithi yakho, i-Google Bhizinisi Lami, i-Instagram, i-Facebook, nezinye iziteshi.
Yamukela - Yamukela ukubhuka kusuka kumakhasimende 24 × 7. Vumela amaklayenti azihlelele, ahlele kabusha, futhi akhansele ngokuvumelana nawo.
Ukuqokwa kungomunye wabaholi bemboni kusizinda sokuhlela ukuqokwa. Ngemodeli yamanani we-freemium, isekela amabhizinisi wabo bonke osayizi. Iphinde ithuthukise ukuhlelwa kokuqokwa kwesoftware okwenziwe ngamabhizinisi amakhulu / amabhizinisi amakhulu ukubhekelela ukufakwa uphawu lokubeka uphawu kanye nezidingo ezithile zokuhlela.
Ukulungele ukukhulisa ibhizinisi lakho nge-Appointy?
Qala Isivivinyo Sakho Sokuqokwa Sezinsuku eziyi-14 Namuhla!
Tags: ukuqashwaqokaikhalendaukuhlela ukuqokwa onlineisheduli onlinezoomzoom aphoyintimenti